Maitiro Ekuvandudza Maitiro Eako Ekutengesa | Martech Zone
Maitiro Ekuvandudza Maitiro Eako Ekutengesa
Chishanu, February 10, 2017 Chishanu, February 10, 2017 Douglas Karr
Saka shamwari dzangu zhinji vanhu vakuru vekutengesa. Kutaura chokwadi, handina kana kumboremekedza hunyanzvi hwavo kusvika ndatanga bhizinesi rangu ndikarovera ipapo. Ini ndaive nevateereri vakakura, hukama hwakasimba nemakambani aindiremekedza, uye nebasa rakakura ravaida. Hapana chimwe cheizvozvo chakakoshesa wechipiri ini ndakapinda nepasuo kuti ndigare pasi pamusangano wekutengesa!
Hapana chandakaita kuzvigadzirira uye munguva pfupi ndakazviwana ndiri munyatwa. Ini ndakatanga kudzidziswa nemurairidzi akanditora pasi pebapiro rake, akasvika pakundiziva uye nezvandaigona, ndokuzondibatsira kugadzira magadzirirwo etsika andaive ndakasununguka nawo kana ndichitsvaga zvekutengesa nekutarisira. Iyo yakashandura bhizinesi rangu, uye ikozvino ini ndinoona vatengesi vakuru vakanditenderedza nekutya maitiro avanoteedzera ekuvhara madhiri.
Rimwe zuva, ndinotarisira kuhaya timu yekutengesa. Hakusi kuti ini handidi izvozvi - asi ndinoziva kuti ndinofanira kutora munhu chaiye pamusuwo anogona kutibatsira kuti tiite zvatinogona. Ini ndinoona makambani mazhinji achihaya, kutendeuka, uye kukuya kuburikidza nevasina ruzivo vatengesi uye ini handingakwanise kuenda nenzira iyoyo. Tinoda kunanga nekutsvaga makambani akakodzera ekushandira navo, tozove nemunhu ane savvy yakakwana yekuvadhonza nemusuwo.
Kune avo vako vane timu yekutengesa, iyi infographic kubva kune Hutano Bhizinesi Muvaki inopa Nzira 10 dzeKuvandudza Kutengesa Kwako Kuita.
Kushanda kwekutengesa kunogona kuderera zvakadzika pasi pebhizinesi rako uye kunogona kutungamira kune zvakakomba mhedzisiro kana isina kutaurwa nekukasira. Mune ino infographic, isu tichakurukura dzakasiyana nzira dzekuti iwe ungawedzere sei kuvandudza kushanda kwechikwata chako chekutengesa kuitira kuti bhizinesi rako rirambe richikura uye kubudirira nhasi uye kumakore anotevera.
Nzira 10 dzeKuvandudza Kutengesa Kwako Kuita
Ipa zvakaoma kudzidza uye zvinotevera.
kurudzira yako yekutengesa timu.
Ziva kiyi simba yenhengo yega yega yechikwata.
Bata vatengesi vako vanozvidavirira.
Ipa rako rekutengesa timu neakakura dhata.
Mufambiro wenguva dzose One-on-one misangano.
Iva maonero ezvese yevatengi vako.
Usanyanya-mainjiniya wako maitiro ekutengesa.
Shingairira kutungamirira kutarisira uye lead alama.
Ita shuwa kuti kutengesa, vatengi, uye kushambadzira ndizvo inowirirana uye Integrated.
Tags: ane hutano anovaka bhizinesisei kutikunatsiridza kutengesaKugonesa Kugonesakutengesa infographickutengesa kuitamaitiro ekutengesakutengesa kudzidzisakutengwa
Yakawanda Sei Kuburitsa Zvemagariro Media Mari?